Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Air Belgium ifumana i-Airbus A330neo jet yayo yokuqala
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba zaseBelgium zokuPhula • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Air Belgium ifumana i-A330neo jet yayo yokuqala
Usapho lwe-A330neo sisizukulwana esitsha i-A330; yakhela kuqoqosho oluqinisekisiweyo, ukuguquguquka kunye nokuthembeka koSapho lwe-A330, ngelixa kuncitshiswa ukusetyenziswa kwepetroli kunye nokukhutshwa kwe-CO2 malunga neepesenti ezingama-25.
I-Air Belgium iya kuhambisa inqwelomoya kwiindlela ezidibanisa iBrussels ukuya kwiindawo ezinde.
Inqwelomoya ihleliwe inezihlalo ezingama-286 kulwakhiwo lweeklasi ezintathu- iklasi yokushishina engama-30 ekhululekile, iklasi yeprimiyamu engama-21, kunye nezihlalo ezingama-235 ezikudidi lwezoqoqosho.
Zonke izitulo zixhotyiswe ngezizukulwane zamva nje, kwinkqubo yokonwabisa inqwelomoya, kwi-Wi-Fi ebhodini kunye nokukhanya kwemood.
I-Air Belgium, inkonzo ephetheyo kwilizwe liphela e-Mont-Saint-Guibert eBelgium, ithathe unikezelo lokuqala lwe-A330-900.
Inqwelomoya ihleliwe inezihlalo ezingama-286 kulwakhiwo lweeklasi ezintathu (i-30 yeklasi yokushishina ekhululekile, iklasi ye-premium ye-21, kunye nezihlalo ezingama-235 ezikudidi lwezoqoqosho). Inqwelomoya inikwe i Airbus Ikhabhathi yomoya. Zonke izitulo zixhotyiswe ngezizukulwane zamva nje, kwinkqubo yokonwabisa inqwelomoya, kwi-Wi-Fi ebhodini kunye nokukhanya kwemood.
Enkosi kubuchwephesha be-A330neo's, Umoya weBelgium bayakuxhamla kwizisombululo zeenqwelomoya ezingabizi mali ininzi kwaye zisebenza ngokufanelekileyo, ngelixa babonelela abakhweli ngemigangatho yokufumana intuthuzelo kwezona ndlwana zithuleyo kwiklasi yabo. Ukongeza, ingxolo esezantsi kunye nokukhutshwa xa kuthelekiswa neenqwelo moya zangaphambili-zokwenza ukuba i-A330neo ibe ngummelwane onobuhlobo kwisikhululo seenqwelomoya.
Umoya weBelgium Izakusebenzisa inqwelomoya kwiindlela ezidibanisa iBrussels ukuya kwiindawo ezinde.
Umphathi weBelgian ngoku usebenza zonke-Airbus izithuthi ezibanzi ezibandakanya i-A330-200F kunye ne-A340-300; ii-A340s ziya kutshintshwa ngokuthe ngcembe zii-A330neos.
Usapho lwe-A330neo sisizukulwana esitsha i-A330; yakhela kuqoqosho oluqinisekisiweyo, ukungaguquguquki kunye nokuthembeka kosapho lwe-A330, ngelixa kuncitshiswa ukusetyenziswa kwepetroli kunye ne-CO 2 Ukukhutshwa malunga neepesenti ezingama-25 ngesitulo ngasinye xa kuthelekiswa nesizukulwana sangaphambili, inqwelomoya yenqwelomoya, kwaye inikezela ngesakhono esingenakuthelekiswa nanto. I-A330neo ixhotyiswe ziinjini zeTrent 7000 zeRoll-Royce kunye nephiko elitsha elinokwanda kwesithuba kunye namaphiko adityanisiweyo angcono, ukubetha i-aerodynamics.
Ngencwadi yoku-odola ngaphezulu kwe-1,800 yenqwelomoya evela kubathengi abali-126 ekupheleni kukaSeptemba 2021, i-A330 iseyeyona nqwelomoya ithandwayo kusapho lonke.